Ajendaha aan ku dabooli Karin Baltimore - Geofumadas
Abriil, 2008 Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, Video
Sida Ricardo Arjona uu sheegayo, fiiri in dunidu aysan ku faraxsaneyn oo yar; Waxaan ku jiri doonaa Shirka 2008 ee Baltimore, Maryland laga bilaabo 28 ilaa 30 bisha May; oo xaq u leh Jaamacadda Salisbury Shirarka bari ee Nidaamka Manifold on maalmaha 29 iyo 30.
Ka hor inta aanan ka hadlin sida ay xiiso u leedahay in shirku muujiyo kaliya $ 50 ... khariidada waxay u egtahay mid dhow , laakiin waxay yihiin 181 mayl fog, qiyaastii laba saacadood ... waa maxay xishood, inkastoo aan wali dareemo soo-bax.
Dhibaatada kale ee adduunkani yaryahay waa muuqaal ah in Google Earth daabacday maanta, oo ah nooca 4.3 halkaas oo lagu muujiyo waaberiga iyo qosolka leh wata fudud oo ah badhanka iyo naqaska aragtida waddada. Murugo, in qaabka dhismayaasha 3D ay Baltimore u isticmaashay aagga Iterbor, sida ugu muuqata in ay ugu dambeyntii heshay hab lagu ogaado 3D faahfaahin degdeg ah.
Halkan waxaan kaaga tagayaa si aan u arko inay dhammaato, inkastoo aan saaxiibkeyga ah ee Google Earth Blog Hore ayaan horay u soo bandhigay; qofna kuma guuleysan marka uu timaado qalabka ciyaaraha Google.
blog Google Earth GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous NewsGPS.com, blog ah ayaa loogu talagalay GPS
Post Next Fikradaha Dhexdhexaadinta ahNext »